ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓစာပေအချို့မှာပါတဲ့ ရသေ့ဇော်ဂျီတပသီတွေ ပျော်ပါးဖို့ရာအတွက် လူအစစ်အဖြစ်
ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းမှာ တွေ့ရတဲ့ လူပုံစံသစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါပါတယ်။
သူယောင်မယ်သီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိတဲ့ပုံတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗဟုသုတရစေချင်လို့ ပြန်ဝေငှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အကယ်၍ မူရင်းဆိုဒ်ကို သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ http://www.hoax-slayer.com/nareepol-tree.shtml
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တွေ့နိုင်တယ်ဆိုပြီး စာထဲကအတိုင်း အမြည်းထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ This is amazing tree named "Nareepol" in Thai. Naree means "girl/woman" and pol means plant/tree or "buah" in Malay. It means women tree. It is amazing what God create the World in many forms that amused human beings….